घटस्थापना कहिले गर्ने ? यस वर्ष शुभ मुर्हूत यस्तो छ – SaipalNews.com
Sunday, 25, October, 2020	info@saipalnews.com
घटस्थापना कहिले गर्ने ? यस वर्ष शुभ मुर्हूत यस्तो छ
काठमाडौं।महान पर्व बडादशैंको उल्लास सुरु भइसकेको छ । यस वर्षको असोज २४ बाट नौरथा सुरु हुँदैछ । नौरथामा नौ दिनसम्म दूर्गा भवानीको पूजा उपासना गरिन्छ । हिन्दू धर्माबलम्बी भक्तजनहरुले यी नौ दिनमा आफ्नो घरमा घटस्थापना गरी अखण्ड ज्योति स्थापना गरेर नौ दिनको उपवास राख्छन् । यसपालि नवरात्रमा घटस्थापना एवं अखण्ड ज्योति प्रज्ज्वलनको शुभ मुहुर्त कहिले छ त ?
यस क्रममा सम्भव भएसम्म अखण्ड दीप बाल्नुहोस् । यदि बत्ति घिउमा बाल्नुभएको छ भने त्यसलाई दुर्गाको मूर्तिको दाँयातर्फ राख्नुहोस् र यदि बत्ती तेलको बाल्नुभएको छ भने त्यसलाई मूर्तिकाे बाँयातर्फ राख्नुहोस् ।
परीक्षा नियन्त्रकलाई कोरोना संक्रमण, त्रिवि परीक्षा कार्यालय सिल
जो जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँ त्यहीँ रहेर दशैँ मनाऔँःप्रम
विद्यार्थीसमक्ष प्रधानमन्त्रीले महानन्दको कविता सुनाएपछि…
कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी विष्टसहित प्रहरीले पाए सफाइ